Lateral Flow Test Training- Lateral Flow Assay Development ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
နတ်သမီး - Latarl Flow Assay ပစ္စည်းများ & ဘေးထွက် Flow Assay ဖွံ့ဖြိုးရေးပစ္စည်း
Lateral Flow စမ်းသပ်ခြင်းသင်တန်း
Lateral Flow Assay ပစ္စည်းများ
Lateral Flow Assay Development Kit ဖြစ်သည်
Lateral Flow Assay ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပစ္စည်း
Lateral Flow Test Strip Manufacturing အတွက်အထောက်အကူများ
Antigen Test Kit Manufacturing Unit ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲ
နတ်သမီး'' Lateral Flow Team 'သည် ၁၅ နှစ်ကျော်နှစ်ဘက်ခြမ်းစီးဆင်းမှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးတွင်ပါ ၀ င်သောကျွမ်းကျင်သူအချို့ပါ ၀ င်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူအားလုံးသည် lateral flow assay test kit R&D အလုပ်နှင့်ကြီးမားသောထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာတို့နှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားလုံးတွင်အတွေ့အကြုံကောင်းရှိသည်။ ကုန်ကြမ်းနှင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများမှထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသို့ နတ်သမီး IVD စက်မှုလုပ်ငန်းသို့ ၀ င်ရောက်လိုသူများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ပညာရေးနှင့်သင်တန်းများပေးလိုပါသည်။ ဒီမှာငါတို့ပေးတယ် lateral flow test လေ့ကျင့်ခြင်း သင်တန်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Lateral Flow Test သင်တန်းအမျိုးအစားများ
1. Basic Lateral Flow Test Training (၃ ရက်)
၂။ Custom Lateral Flow Test Training (အဆင့် ၁၅ ဆင့်လေ့ကျင့်မှု)
၃။ VIP Lateral Flow Test Training (ရက် ၃၀ သင်ယူခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်း)
Basic Lateral Flow Test Training အတွက်အချိန်ဇယား
ဇန်နဝါရီလ 2022 ရောက်နေတယ်
ဒီဇင်ဘာ 2021 ရောက်နေတယ်
နိုဝင်ဘာ 2021 ရောက်နေတယ်
အောက်တိုဘာ 2021 ရောက်နေတယ်
စက်တင်ဘာ ၁၄ ရောက်နေတယ်
သြဂုတ် 2021 ရောက်နေတယ်
ဇူလိုင်လ 2021 ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော
ဇွန် ၂၀၂၀ အပြီးသတ်
မေလ 2021 အပြီးသတ်
Apr. 2021 အပြီးသတ်
အင်္ဂါနေ့ 2021 အပြီးသတ်
ဖေဖော်ဝါရီလ 2021 အပြီးသတ်
ဇန်နဝါရီလ 2021 အပြီးသတ်
ဒီဇင်ဘာ 2020 အပြီးသတ်
Basic Lateral Flow Test သင်တန်း၏သင်တန်း
Immunomy chromatography နည်းပညာ (colloidal gold technology) ဟုလူသိများသော chromatography / immunochronization / colloidal နည်းပညာပေါင်းစပ်ထားသောဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးနောက်နည်းပညာသည် classic colloidal gold nanoparticles မှ latex microspheres, fluorescent microspheres, quantum dots နှင့် magnetic microspheres စသည့်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးသို့တဖြည်းဖြည်းချဲ့ထွင်လာခဲ့ပြီးနည်းပညာသည်အစဉ်အလာနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်အဆက်မပြတ်တိုးတက်နေသည်။ နည်းပညာသည်ခိုင်မာသောရှင်သန်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်။ in vitro ရောဂါရှာဖွေရေးနယ်ပယ်၌အစားထိုးမရနိုင်သောအခန်းကဏ္မှပါဝင်သော in vitro ရောဂါရှာဖွေရေးနယ်ပယ်၌နေရာတစ်ခုရှိသေးသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၎င်းသည်အရေးကြီးသောအခြေခံဇီဝနည်းပညာဖြစ်သောရေရှည်တည်တံ့သောတိုးတက်မှုအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်တန်းသည်သုံးရက်အတွင်းပြီးလိမ့်မည်။ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းသည် classic colloidal gold နည်းပညာ၊ chromatography နည်းစနစ်များနှင့်နည်းပညာအကောင်အထည်ဖော်မှုအသေးစိတ်များကိုအခြေခံသည်၊ ကျောင်းသားများကိုအလျင်အမြန်စတင်ရန်၊ နည်းပညာများသို့ ဖြတ်၍ လမ်းလွှဲနည်းများကိုခွင့်ပြုသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်တန်းများသည် fluorescent microspheres, quantum dots, သံလိုက်အမှုန်များစသည့် quantumative chromatographic နည်းစနစ်များကိုမိတ်ဆက်လိမ့်မည်။
၁။ အသုံးပြုနည်းနှင့်ထိန်းသိမ်းပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အခြေခံပစ္စည်းများကိုမိတ်ဆက်ပါ။
၂။ Nitrocellulose အမြှေးပါးကိုမိတ်ဆက်ပါ၊ NC အမြှေးပါးကိုမည်သို့မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပုံကိုမိတ်ဆက်ပါ။
၃။ ဇီဝတက်ကြွသောပစ္စည်းများမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်အသုံးချခြင်း၊ မျက်နှာပြင်တက်ကြွသောအေးဂျင့် (tween)၊ BSA ရွေးချယ်မှု၊ ကြားခံစနစ်စသည်
၄။ quantitative lateral flow assay test ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ နှင့်၎င်း၏ပစ္စည်းရွေးချယ်ရေး
၅။ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများရွေးချယ်ခြင်း၊ ဘေးတိုက်စီးဆင်းနေသောကျောထောက်နောက်ခံကဒ်၊ နမူနာ pad၊ conjugate pad၊ စုပ်ယူနိုင်သော pad၊ သွေးခွဲခြမ်းပြား၊ တိပ်စသည်
၆။ colloidal gold nanoparticles ပေါ်တွင်စမ်းသပ်မှုအခြေခံကိုပြီးအောင်လုပ်ပါ
၆.၁ ပေါင်းစပ် colloidal ရွှေ nanoparticles (တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်)
၆.၂ conjugate pad ကိုပြင်ဆင်ပါ၊ ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီး antigen/antibody ကိုတံဆိပ်တပ်ပါ
၆.၃ nitrocellulose အမြှေးပါးကိုဖြန့်ဖြူး။ reagent ကိုဖြန့်ပါ
၆.၄ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများရွေးချယ်ခြင်း (pads)၊ ကြားခံစနစ်ပြင်ဆင်မှု၊ အပိုပစ္စည်းများရွေးချယ်ခြင်း
၆.၅ Lamination လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် lateral flow assay test (finish product) ဖြစ်လာသည်။
၆.၆ အရည်အသွေးဆိုင်ရာနည်းစနစ်မှ quantitative technique (quantum dots assay method, equipment, raw materials, etc. )
lateral flow assay development နှင့် lateral flow test strip ထုတ်လုပ်မှုကိုစိတ်ဝင်စားသောလူတိုင်း
startup ကုမ္ပဏီ၊ တက္ကသိုလ်သုတေသနအဖွဲ့များအတွက်ကန ဦး အဆင့်များ၊ ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့၊ သုတေသနအဖွဲ့သည်အလယ်အလတ်မှအရွယ်အစားပိုကြီးသည်
မဟုတ်ဘူး! ၎င်းသည်အခမဲ့သင်တန်းမဟုတ်ပါ၊ သင်တန်းအတွက်အခကြေးငွေအချို့ကိုကောက်ခံလိမ့်မည်။
အခကြေးငွေများသည်ဟောပြောပွဲများနှင့်မိတ္တူများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းသို့သွားခြင်း၊ ပရိုတိုကောလ်မိတ္တူများ၊ ကိရိယာများ၊ စံပစ္စည်းများနှင့်ဓာတ်ကူပစ္စည်းများအားလုံး၊ နေ့လယ်စာနှင့်ညစာစားပွဲတစ်ခုတို့ပါဝင်သည်။ ဗီဇာကြေး၊ လေယာဉ်လက်မှတ်များ၊ ခရီးနှင့်တည်းခိုခန်းများမပါဝင်ပါ။
lateral flow assay training အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်ကိုဆက်သွယ်ပါ
Lateral Flow Assays: မူများ၊ ဒီဇိုင်းများနှင့်တံဆိပ်များ
Lateral Flow Pregnancy Test နှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
Lateral Flow Assay Troubleshooting လမ်းညွှန်
Lateral Flow Immunochromatographic Assay ဆိုတာဘာလဲ။
Lateral Flow Assay ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းညွှန်
A1-519, XingGang GuoJi, Yingbin လမ်း, Huadu, Guangzhou, တရုတ်
ဘေးထွက် Flowမိုက်ခရိုဗဟိုLab ကပစ္စည်း
WhatsApp ကို: + 8613312863972
linkedin facebook Pinterest youtube က rss twitter instagram ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် RSS-blank လိပ်စာ - ကွက်လပ် Pinterest youtube က twitter instagram
ငါတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၌အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံရရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ဤ site ကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရန်သဘောတူသည်။